Maitiro Ekurega Izvo Zvekare: 16 Hapana Bullsh * t Matipi! - Pfungwa
Maitiro Ekurega Izvo Zvekare: 16 Hapana Bullsh * t Matipi!
Pasts. Tese tine imwechete.
Dzimwe nguva pane zvinhu kubva munguva yedu yakapfuura zvatinoshuvira kubatisisa. Ndangariro dzatinokoshesa. Nguva dzatinoshuva kuti dai takave nezvose zvakare.
Ikozve kune zvinhu kubva medu zvakapfuura izvo isu zvatinoshuvira kurega kuenda. Ndangariro dzatinoda kudzinga. Nguva dzatinoda dai dzisina kumboitika.
Sezvo iwe uri kuverenga izvi, iwe uri kutsvaga rubatsiro kune yekupedzisira. Iwe unoda kurega zvekare - kana chimwe chikamu chazvo.
Wakaedza kare usina rombo rakanaka, uye ikozvino iwe unotsvaga imwe nhungamiro yekuti ungaburitsa sei mutoro kubva kuhupenyu hwako kusvika parizvino.
Yambiro yakanaka: maitiro aya haasi kugara achikurumidza kana nyore. Zvinoda kushanda nesimba uye kushingirira.
Asi, nekutevera iwo matipi pazasi, iwe unogona kuchengetedza kumberi kukwira munzira kwayo sezvo iwe zvishoma nezvishoma uchisunungura zvakapfuura kubata kwako iwe nehupenyu hwako.
Kune mativi maviri eichi chiitiko. Kutanga, iwe unofanirwa kuziva izvo ASI zvekuita.
Vanhu vazhinji vanosarudza imwe yeayo mashoma maitiro ayo anogadzira kunyepedzera kwekubata nezvakamboitika apa uchinge usiri kuita chinhu chemhando dzacho.
Izvi zvinofanirwa kudzivirirwa chero zvodii.
Kechipiri, iwe unofanirwa kushandisa akasiyana maturu epfungwa ekukubatsira iwe kunyatso shanda kuburikidza neako apfuura.
Fungidzira iwe waisa chiitiko chinorwadza kubva kare kupinda mubhokisi. Ipapo iwe wakaviga iro bhokisi mukona rakadzika, rakasviba rekabati, risingazomboonekwazve.
sei ndichiitira godo zvevasikana vangu zvakapfuura
Iwe unonyanya kusundira ndangariro dzeichi chiitiko uye ese manzwiro ane chekuita nazvo nzira kudzika mukusaziva kwako.
Dambudziko nderekuti nepo dzvinyiriro dzendangariro dzisingakwanise kupinda zvakanangana nepfungwa dzako dzekuziva, dzinogona kuramba dzichikurudzira mamirire ako nemufambiro.
Uye yakadzvanywa pfungwa kazhinji inowana nzira yekumukazve mukati mekuziva kwepfungwa pane inotevera zuva, zvichikonzera kusagadzikana kusingaite pavanodaro.
Rimwe dambudziko nemifungo yakadzvinyirirwa uye nemanzwiro ndezvekuti iwe hauzive kuti unazvo. Saka kutaura kune yakasimbiswa hutano hwepfungwa nyanzvi inowanzo fanirwa kubata navo (zvimwe pane izvo gare gare).
Kudzivisa kwakafanana munzira dzakawanda dzeudzvanyiriri, asi panguva ino zvakapfuura zvichiri kuwanika kune pfungwa dzinoziva.
Zvakafanana kuva nebhokisi iro rine ndangariro mukati uye kungoisiya nemusuwo wekumashure kuti ubatwe nawo gare gare.
Iwe unoziva uripo, asi iwe unofamba uchiipfuura nguva dzese. Haumiri kuvhura.
Asi kudzivisa zvakapfuura hakuzokutenderi kuti uzvibvise.
Zvese zvainoita kunonoka izvo zvisingadzivisike. Munguva pfupi inotevera, uchafanirwa kuvhura iro bhokisi uye kubata nezviri mukati.
3. Usaedze Kukanganwa Nezvo
Zvekare, izvi zvakafanana nekudzvanyirira, asi iwe haubvumidze zvakapfuura zvakazara iwe unongotarisira kuti nguva inozopedzisira yakubvumidza iwe kukanganwa nezvayo.
Dambudziko nemaitiro aya nderekuti kana paine kurwadziwa kana kushungurudzika kwakanamatira kune zvakapfuura, hauzombozvikanganwa zvizere.
Uye nguva imwe neimwe yaunorangarira, unounza kurwadziwa kana kushungurudzika zvakare muhupenyu hwako.
Chokwadi, iwo matekinoroji anotevera mumashure muchinyorwa achakubatsira iwe kudzikisa kukanganisika kwendangariro, asi kashoma isu tinokanganwa nezvezvinhu zvakakonzera kukwirira kwemanzwiro.
4. Usaedze Kuchinja
Imwe nzira yakashata yekusiya yapfuura ndeyekuchinja ndangariro yako.
Unogona kuedza kunyepa zvako nezve zvakaitika kuti manzwiro akasungirirwa muchiitiko aite senge asina kugadziriswa, asi haugone kuzvinyengedza zvakakwana.
Iwe uchazoziva chokwadi chaicho, kunyangwe ukasazvibvuma iwe kana vamwe.
Saka hazvina kukodzera kuedza kugadzira nyaya nyowani mumusoro mako.
5. Sarudza Manzwiro Ako Kubva Pandangariro Dzako
Iye zvino zvatakakuudza iwe zvausingafaniri kuita, ngatitange kutarisa zvaunofanira kuita.
Iyi poindi ndeye yakanyanya pamusoro dingindira rinopinda mukati nekubuda kune vese avo vanotevera.
Iwe unoona, kurega zvakaitika zvakapfuura kunoreva kurega zvekare kunanga simba pane yako yazvino.
Uye zvakapfuura zvinogona chete kudzora kutonga kuburikidza nemanzwiro ako pazviri.
Chiyeuchidzo pachacho chinoumbwa nezvikamu zviviri: manzwiro awakasangana nawo uye pfungwa / manzwiro awaive nawo.
Iwo manzwiro - mhedzisiro yeshungu dzako shanu - zvinhu zvakaita sekumiririrwa kwekuona kwezvakaitika, hwema uye kurira kwakakukomberedza, uye manzwiro enyama awaive nawo.
Uku ndiko kuzara kuzere kwendangariro. Unogona kurangarira uchienda kuzvitoro nezuro, asi chete mupfungwa yezvinhu zvawakaona nekunzwa, nezvimwe.
Ikozve kune iko kusanganiswa kwepfungwa nemanzwiro awakange uine panguva uye mushure mechiitiko.
Izvi zvinogona kuve zvakanaka (mufaro wakakura wekuona / kunzwa mwana wako kekutanga) kana kusagadzikana (kusuruvara, kutsamwa, uye kushatirwa kana mumwe wawakarambana naye akarambana newe).
Asi sezvo iwe uchida kurega zvakapfuura, isu tichafunga kuti hazvina kunaka.
Kuparadzanisa manzwiro ako ekurangarira kubva pakunzwa kwendangariro kunokutendera kuti ushandire pane iwo manzwiro usingadzvinyiriri, kudzivirira, kukanganwa, kana kushandura chikamu chekunzwa chendangariro.
Mazhinji emapoinzi anotevera anokubatsira iwe kuita izvi.
6. Tora Kudzora Kwemafungiro Ako
Hatisi kukurudzira kuti umire kufunga nezve chiitiko chekare nguva dzese padzinopinda mumusoro wako - ndiko kunzvenga kwatakataura nezvako kare.
Zvatiri kukurudzira ndezvekuti iwe gadzirisa iyo nguva yenguva iyo iwe yaunotendera pfungwa dzako kuti dzigare pane zvakapfuura mune chero chiitiko chimwe.
Iwe unofanirwa kurangarira zvakapfuura kuti ushande kuburikidza nazvo, asi haufanire kuzviita zvese kamwechete.
Saka kana iwe ukawana yako mifungo yakanamatira pane iyo chiitiko iwe yaunoda kurega kuenda, zviudze iwe kuti iwe unogona kungo funga nezvazvo kwemaminetsi mashanu (kana chero hurefu hwenguva yaunogadzikana nahwo).
Mushure mekunge iyo nguva yakwana, iwe unofanirwa kuchinjisa pfungwa yako yekuziva kune chimwe chinhu. Zvichida chimwe chinhu chakanaka, asi kunyangwe hunyanzvi hwekurarama kwezuva nezuva huchaita.
Kudzora pfungwa dzako nenzira iyi kunodzivirira runyerekupe rusina hutano.
Izvo zvakare zvinokupa iwe mukana wekunzwa uye kuratidza iwo manzwiro akasungirirwa kune zvakapfuura usingavabvumire kukura zvakanyanya.
Iwe unogadzirisa nekurwadziwa uye kurwadziwa kamwe kamwe panguva kuti zvikwanisike.
7. Ramba Kufunga Nezve 'Ko-dai'
Chinhu chimwe chete chaunokwanisa kudzivirira kubva mupfungwa dzako ndidzo pfungwa dzinopinda munzvimbo dzekufungidzira - iyo 'if-ifs.'
Kana isu tichirwadziwa kana kushungurudzika, zvakajairika kwatiri kuti tizvibvunze isu zvataigona kunge takaita nenzira dzakasiyana kudzivirira chiitiko chakadai.
Ko dai iwe wakabata mumwe wako zvakasiyana vangadai vasina kutendeka here?
Ko kana iwe ukatarisa mwana wako zvakanyanya vangadai vakaramba vaine tsaona iyoyo?
Ko dai iwe wakatora imwe nzira yekudzokera kumba husiku ihwohwo ungadai wakabirwa pabanga?
Muzvokwadi, hauzomboziva kuti mhedzisiro yacho ingave ipi dai iwe wakaita zvakasiyana mumamiriro ezvinhu.
Iwe waita zvawakaita iwe. Vamwe vanhu vakaita zvavakaita. Chiitiko chakaitika.
Hapana huwandu hwekufunga hunogona kuzombochinja izvo.
Zvese zvazvinoita zvinokonzeresa kurwadziwa kwepamoyo nekukuremedza nemutoro wemhosva uye nemhosva.
16 Makotesheni Okukubatsira Iwe Kurega Izvo Zvekare
Hupenyu Hwakanaka - Pfuura Izvo Kana Kushatirwa. Ndicho Sarudzo Yako.
Maitiro Ekumira Kunzwa Une Mhaka Yezvakakanganisa Kare Uye Zvinhu Zvawaita Zvakaipa
8. Dzidza Chero Zvidzidzo Kubva Chiitiko
Izvi zvinoita sekunge zvinonzwisisika pakutanga, asi bvunza izvo zvidzidzo zvaunogona kudzidza kubva pane zvakapfuura.
Unogona kunge uchishamisika kuti izvi zvakasiyana papi ne 'chii-dai' isu takakuudza kuti udzivise pamusoro.
Zvakanaka, zvidzidzo hazvitsvage kuchinja zvakapfuura. Zvidzidzo zvinotsvaga kugadzirisa ramangwana rako.
Iwe unogona kutarisa pazviitiko zvaunoda kurega uye wobvunza izvo iwe zvaungaite zvakasiyana mune ramangwana mamiriro akafanana.
Chii chaungaite kuti usazopinda mumatambudziko emari zvakare?
Chii chaungaite kusatsamwisa mumwe munhu senge iwe akatsamwisa shamwari yepedyo nguva pfupi yadarika?
Chii chaungaite kudzivirira kudzingwa basa mune ramangwana?
Iyi yose mienzaniso yepfungwa inotevera…
9. Tarisa pane iwo Mapoinzi Akabuda Kubva Zvakaipa Zvakapfuura
Paunotarisa kuti ndiwe ani semunhu nhasi, uchaona kuti zviitiko kubva munguva yako yapfuura zvakakuumba sei.
Kunyangwe izvo zviitiko zvaunoda dai zvisina kuitika.
Hupenyu kunetsekana dzimwe nguva, uye zvinhu zvakaipa zvinoitika kuvanhu . Dambudziko iro rinogona kusiya mavanga epfungwa uye kunyangwe epanyama, asi rinogona zvakare kukusiya iwe wachinja munzira dzaungagone kuona seyakajeka.
Kuvhunduka kwekurasikirwa nemumwe wako muhupenyu - kunyanya kana vakafa vachiri vadiki - kunogona kukuvadza, asi zvinogona zvakare kukuratidza kuti une simba uye unokwanisa sei.
Iko kushushikana kwekuitwa kuwanda pasina ziviso pfupi uye kuva nemhuri yekutarisira kunogona kukuremedza, asi zvinogona kunge zvakakutungamira kuti uongorore sarudzo yako yebasa uye uteedzere chimwe chinhu zvakanyanya maererano nezvido zvako.
Chirwere kana kukuvara zvinogona kunge zvakakusiya uine matambudziko ehutano kwenguva refu, asi zvinogona kunge zvakachinjawo maonero aunoita hupenyu uye nemabatiro aunoita zvinhu zvekutanga.
Haasi ese asina kunaka anozove nezvakanaka, asi kwazvinenge zviripo, zvakakodzera kuzvitsvaga uye kuzviyeuchidza nezvazvo nguva dzose.
10. Ziva Kana Ndangariro Dzakare Dzinokanganisa Zviito Zvezvinoitika
Kudzidza zvidzidzo uye kuratidza zvakanaka inzira mbiri dzakanaka dzekutendera zvakapfuura kukurudzira maitiro aunoita mune ino.
Izvo zvisina hutano, zvisinei, ndezvekupa zviitiko zvakapfuura simba rekushandisa kutonga kwepfungwa pane ako epamoyo.
Ngatitsanangure izvi nerubatsiro rwemuenzaniso.
Fungidzira wako wepamberi shamwari akakurasa iwe kunze kwebhuruu. Zvanga zvakaoma kutora nekuti waivada uye hauna kuona chero matambudziko nehukama.
Ikozvino, zvakadaro, iwe wawana rudo zvakare nemumwe mutsva. Asi urikurega kukatyamadzwa nekukuvadzwa kubva muchiitiko chekare chakakanganisa pfungwa dzako nezvehukama hutsva uhu.
Iwe unotanga kutenda kuti, kuitira kudzivirira kudzivirira kukuvara zvakare, iwe unofanirwa kuputsa zvinhu zvisati zvaitika mumwe wako mutsva anga awana mukana.
Zvino, zvine musoro, iwe unogona kuona kuti mumwe wako mutsva mumwe munhu akasiyana zvachose uye haafanire kubatwa sekunge vakafanana newawakamboita.
Asi pamweya, iwe unoshingairira kupatsanura chiitiko chekare kubva pane chazvino uye ramangwana rinogona kuitika kwaunoraswa zvakare.
kuvonga kuita kana iwe wakasuruvara
Uye saka iwe unobvumidza iyo yakapfuura manzwiro kupesvedzera sarudzo dzaunoita mune ino.
Chinokosha kuziva uko pfungwa dzako, maitiro, uye sarudzo zviri kubva.
Iva akatendeseka: ko zvakapfuura zvine chekuita nazvo?
Kana iwe uchikwanisa kutaura, bata pamoyo, kuti hazviite, unogona kuenderera mberi nezvauri kuita kana kutsvaga zvimwe zvikonzero uye kuzviongorora uri wega.
Kana iwe uchifunga kuti pane kana mukana mudiki wekuti kurwadza uye kurwadziwa kubva munguva yako yapfuura kuri kukanganisa zvakananga manzwiro uye manzwiro aunoita izvozvi, mira, tora mweya wakadzika, uye funga zvakare zvaunenge wave kuda kuita.
Izvi hazvireve kuti iwe unofanirwa kudaro bvunza sarudzo dzese dzaunoita - iro idambudziko pacharo - asi iwe unofanirwa kuve wakangwarira chero mamiriro ezvinhu ane zvakafanana nezvakaitika kare zvauri kuyedza kurega.
Aya ndiwo mamiriro ezvinhu apo kusagadziriswa manzwiro anogona kusimudza misoro yavo uye kukanganisa zvaunoita.
11. Chinja Nyaya Yako
Isu tese tine nyaya yatinozviudza isu uye iyo isu isu nekunanga uye zvisina kunangana kuudza vamwe.
Iyi inyaya yekuti isu tiri vanaani, kuti takava sei munhu uyu, uye nezveramangwana redu.
Nhau dzinogona kuve dzakanaka:
Ini ndakasimba, ndarwa zvakasimba kuti ndisvike pandiri, uye ndine zvinhu zvikuru zviri mberi kwangu.
Kana ivo vanogona kunge vasina kunaka:
Ini handina basa, hupenyu hunopesana neni, uye hapana magumo anofadza kwandiri.
Marwadzo uye kukuvara kubva pane zvako zvakapfuura zvinogona kukutungamira kuti iwe ugadzire isina kunaka nyaya. Inogona kutsanangura maitiro aunozviona iwe nehupenyu hwako.
Asi iwe une simba pamusoro penyaya yaunoda kutaura.
Haufanire kubvuma nyaya yawanga uchizviudza wega kwemwedzi yese kana makore iwayo.
Nyaya yako ndeyekufungidzira kwako kwepfungwa kwekuti iwe ndiwe ani uye ndiani waunoda kuve. Zviri kwauri kuti iyo nyaya ndeipi.
Saka kuregera zvakapfuura, zvinobatsira kurega kuenda kwenyaya yakakonzerwa nezviitiko zvekare izvi.
Nyora chimwe chinhu chitsva chimwe chinhu chakanaka uye chinopa simba.
12. Dzidza Kuregerera
Kazhinji, kunyangwe zvisiri nguva dzose, chiitiko chinorwadza kubva munguva yakapfuura chinokonzerwa, muchidimbu, nezviito zvemumwe munhu.
Uye nepo kuregerera kusiri nyore nguva dzose, chikamu chakakosha chekusiya zvakapfuura.
Kukanganwira kuita. Zvinotora nguva.
Asi mabhenefiti eruregerero haanzwikwe nemunhu anenge achiregererwa, asi newe, iwe munhu ari kukanganwira.
Isu tinoenda mune zvakadzama zvakanyanya muchinyorwa chedu pa kuregerera mumwe munhu , saka tarisa uone.
Uye chengeta chirevo ichi naLewis B. Smedes mundangariro:
Kuregerera hakudzime zvakapfuura zvakapfuura. Ndangariro yakaporeswa haisi yekudzima ndangariro. Pane kudaro, kukanganwira izvo zvatisingakwanise kukanganwa kunogadzira nzira nyowani yekurangarira. Isu tinoshandura ndangariro dzezvakare kuva tariro yeramangwana redu.
13. Ita Zviyeuchidzo Zvitsva, Zvinofadza
Kazhinji, hupenyu hwedu hunodzorwa neanongo wandei manzwiro anomuka nekuda kwezvedu uye zvekare.
Kana chimwe chinhu kubva pane yako yapfuura chaive neakakura uye asina kunaka kukanganiswa kwemanzwiro, iwo manzwiro anogona kuramba kwenguva refu.
Imwe nzira yekuchinjisa muyero wepamoyo kune chimwe chinhu chakanyanya kunaka kuita ndangariro nyowani dzinofara.
Idzi ndangariro nyowani dzinokutendera iwe kuti utarise kumashure nekufarira pane kusuruvara kana kutsamwa kana chero zvauri kunzwa izvozvi.
Zvichakadaro ndangariro itsva hadzigoni kudzima zvekare , ivo vanogona kugadzira imwe nhanho yekutamba nhandare maererano nesimba remafungiro iro rekare rave parizvino.
Vanogona kudzikisira kushaya hanya kwakabatana nezvikamu zvekare zvaungade kuti zviende uye nekukubatsira kuti ubvise manzwiro ako kubva pane izvo zviitiko sezvatakambokurukura pakutanga.
14. Dzidza Kugara Mune Ino
Rangarira kuti, mukurega zvakapfuura, hatisi kutsvaga kukanganwa zvakaitika. Isu tinongoshuvira kudzikisira kukanganisa kwayakaita kwauri nhasi.
Kuchengeta kutarisisa kwako nepese paunogona napo panguva ino inzira inoshanda yekuita izvi.
Uku hakusi kunzvenga kwatakayambira pamusoro pekare, asi chishandiso chekudzivirira zvakapfuura kubva mukubuda ropa muchazvino.
zviratidzo zvekuregeredzwa kwepamoyo muhukama
Iwe uchiri kugona kubata nezviitiko zvakapfuura mune izvozvi nguva, asi iwe unozviita nenzira isina chinangwa uye nepfungwa dzako nepfungwa dzakavakirwa pane zviri kuitika pano uye ikozvino.
Muchokwadi, uchitarisa kuti wakachengeteka sei uye wakasununguka mune ino uye ikozvino inogona kukubvumidza iwe kuti uswedere kune dzakaoma ndangariro zvinobudirira.
Mukukosha, iwe unogadzira nzvimbo yakachengeteka iwe yekuburitsa iro bhokisi uye kubata nezvose zviri mukati.
15. Ita Zvirongwa zveRamangwana
Imwe nzira yekudzivirira kuremerwa kwepamoyo kwezviitiko zvakapfuura kubva mukuraira hupenyu hwako kuve neziso rimwe pane ramangwana raungade kuti riitike.
Nekuita zvirongwa zvakanaka zveramangwana rako, unozvipa iwe chimwe chinhu chekunakidzwa nezvacho parizvino.
Kupfuura izvo, iwe unogona nehana kusarudza kusatendera zviitiko zvakapfuura kukanganisa zvinangwa zvako uye zviroto nenzira yakaipa.
Ivo vanogona kunge vachine simba, asi inogona kuve yeimwe yekufarira kana iwe uchibvumira kuti ive.
Semuenzaniso, zviitiko zvako zvekare zvekushungurudzika uye zvimwe zvehutano hwepfungwa zvinogona kukutyaira kumisikidza rubatsiro kubatsira vamwe vanotambura nematambudziko akafanana.
Kana, kana iwe ukatambura kuregeredzwa semwana, izvi zvinogona kukuendesa kubasa rekuchengeta vanhu kana mhuka dzisina mumwe munhu anozvichengeta.
Aya marongero haabvise kukuvara kwawakawana, asi anogona kubatsira kushandura nzira yaunoona iyo zviitiko.
16. Taura Kune A Mental Health Professional
Zvimwe zvinorwadza kubva munguva yakapfuura zvakanyanyisa kuomarara kuzviita tega. Kumwe kukuvadza kunoda ruzivo rwakakosha rwemumwe munhu akadzidziswa matekinoroji anoshandiswa kushanda kuburikidza navo.
Kana iwe wakamboedza uye ukaedza kurega zvekare, asi usati wabudirira zvakanyanya, iwe unofanirwa kufunga nezve kuwana rubatsiro rwehunyanzvi.
Vanogona kukwanisa kupa imwe nzira yakarongeka yekugadzirisa kushungurudzika kwekare uye kukubatsira iwe mukushanda nayo.
Kunyangwe iwe uchifunga kuti chiitiko chekare hachisi chimwe chinhu chinofanira kuda rudzi urwu rwekubatsira, usatonge kunze.
Vazhinji vanhu vanogona kubatsirwa nekutaura kune nyanzvi uye kana paine chimwe chinhu kubva pane yako yapfuura yakaturikwa pamusoro pako, kunyangwe zviite sezvisingakoshi sei, kuwana rubatsiro isarudzo ine hutano.
Taura nachiremba kuti uwane rubatsiro rwaunoda - tinya pano kuti ubatanidze neumwe.
sei kurega kuvenga munhu akakunyengera
maitiro ekudzokera kumukadzi wechi narcissist
kuziva sei kuti wakanaka
maitiro ekudzora godo rako muhukama
nzira yekuwana nayo mufaro muwanano yako
hupenyu ndozvaunoita nhetembo